China Concession Food Trailer Hamburger Imveliso yasekhitshini kunye neMveliso | Huanmai
Ukutya iTrakhi yokuTya
Boxer Ukutya Iinkuphelostencils
Iinqwelo zokutya ezincinci
Imvume yokuThengisa iTrailer yeHamburger Ikhitshi eliSelfowuni
Ukutya Mini Trailer Trailer Ic ...
Ukutya okuSelfowuni kweTrailer yeTrailer ...
Imvume yeeTrailer eziSelfowuni ...
Ukutya okuSelfowuni kwiVan Coffee ...
I-Airstream Food Conces ...
Eli khitshi lihambayo liyila uyilo lwe-asi ezimbini ngobukhulu be-340cm kwaye inendawo eyaneleyo yabantu abayi-1 ~ 2 ukuba basebenze. Ikhitshi elihambahambayo lixhotyiswe ngee-asi ezingenisiweyo ukuze zikhuseleke. Umbala obomvu, ipeyinti ecwebezelayo. Eli khitshi elihambahambayo lilungele zonke iintlobo zokutya (ikofu, iiburgers, ice cream, izinja ezishushu, njl.
Eli khitshi elihambahamba livela kwimeko elungiselelwe wena evela kumthengi waseSpain.
Yonke ikhitshi elihambahambayo lenziwe ngesiko.
Iimeko eziboniswe emfanekisweni zenziwe ngokwezifiso ngabanye abathengi ukubhekisa kuphela.
Ukuba ufuna ikhitshi eliqhelekileyo lesiko, nceda unxibelelane nathi ngekoteyishini yamva nje.
Izinto eziphathekayo Zu + Plate Steel
Isakhelo Isefu yentsimbi
Isisu semoto Isefu yentsimbi
Umgangatho Ipleyiti yealuminium engatyibiliki
ITire I-185 / R14
Counter / Bench Yenziwe ngentsimbi eshayinayo
Ubungakanani 340x200x240cm 11.15x6.56x7.87ft (LxWxH)
Ubunzima 660kg 1455 lb
Uqwalaselo olusisiseko lwale khitshi elihambayo
Itawuli + yeevili zejokhi
Umgangatho we-aluminium ongatyibiliki
Iyafana nemifanekiso yale khitshi ehambayo
Taillight + Inkungu ekhombisa + unxantathu kugqame
Idinki zamanzi kabini + 1 isinki yesandla
Iziseko ze-EUR + Umaphuli wesekethe
Ngaphantsi kwefriji yekhawuntari
Le trailer yokutya enobungakanani be-340x200x240cm, umbala obomvu, kunye noyilo lwe-asi ezimbini. Obu bungakanani uyilo olungagqibekanga lwe-axis eyodwa, kodwa umthengi ufuna ii-axis ezimbini. Ipeyinti yokutshiza yipeyinti eqaqambileyo, ejongeka njengesipili kwaye iyabonakalisa. Ukongeza, unokukhetha ipeyinti yokutshiza matte. Umthengi ukhetha ukuvula iwindow yenkonzo kwindawo esembindini, okanye angakhetha ukuvula iiwindows 2 zenkonzo (eyenziwe ngokweemfuno zakho). Amavili ale trailer yokutya asebenzisa amavili enkanyamba. Ubume obahlukileyo, ohlukileyo kwiitreyila zokutya eziqhelekileyo. Ibhokisi ye-aluminium alloy ifakwe kwi-bar bar, esebenza ngemisebenzi emininzi kwaye inokugcina iisundries, iibhotile zegesi, iijenreyitha, njl.
Izixhobo zasekhitshini zangaphakathi zibandakanya i-gas fryer, isitovu segesi, ifriji yekhawuntari, ukufudumala kokutya, uluhlu lwendawo, isinki, isokethi njalo njalo. Le trailer yokutya yimeko ehlelweyo evela kwabanye abathengi. Unokwenza ngokusesikweni itreyila yokutya efanayo okanye uphinde wenze ngokwakho ukuhambisa ukutya.
Imveliso yeVidiyo Show
Egqithileyo Ikofu yokutya iVan Concession iTrailer yokutya
Okulandelayo: Ukutya Iinkuphelostencils Ukutya Iinkuphelostencils Kona Ice Trucks Coffee Ukutya Trailer
Itraki yeBbq iyathengiswa
Itreyila yeKofu iyathengiswa
Ukuhanjiswa kweTreyila yesiqhelo
Ityuwa yoQinisekiso lokutya
Inja eshushu yeTreyila
Itreyila yeCream Cream
Inqwelo erhuqwayo yasekhaya Ikhitshi
Ipitsa yetreyini yePizza
Itreyila yokutya encinci
Ukutya okuSelfowuni kweTrailer yokuTya ukutya kweVan
I-950 NONG, LONGHAI ROAD, ISITHILI SEJINSHAN, SHANGHAI, CHINA